थाहा पाउनुस् वाईफाईको स्पीड कसरी बढाउने ? - Radio Himalayan
कोरोना संक्रमित नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न नेकपा नेता नेपालको माग
बिआरआईअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आएको गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको भनाइ
विवेकशील र साझाबीचको एकीकरण हुदै
नो ट्रिटमेन्ट’, ‘नो ट्याक्स’ को जनअभियान सामना गर्न तयार रहन सरकारलाई कांग्रेसको चेतावनी
प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डवीच आज भेटवार्ता
दशैंमा सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई जिल्ला नछोड्न गृहको पत्रचार
प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा गर्ने सरकारको तयारी
पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ९३ कोरोना संक्रमित फेला, २ हजार १ सय ८ जना कोरोनामुक्त
दशैं बिदाको पाँच दिन बैंक नखुल्ने
विजया दशमीको टीकाको साइत बिहान १०ः१९ मा, देवी विसर्जनको ८ मिनेटमै टीका
होम आइसोलेसनमा भक्तपुरका कोरोना संक्रमितको ज्यान गयो
“ह्याउँगु स्वां हाकुगु हि” नेपालभाषा कविता संग्रहको विमोचन
थाहा पाउनुस् वाईफाईको स्पीड कसरी बढाउने ?
59 जनाद्वारा पढिएकाे
के तपाईले प्रयोग गर्ने वाईफाई सुस्त चलिरहेको छ ? यदि त्यो हो भने कुनै पनि काम गर्दा सुस्त इन्टरनेटको कारण धेरै समस्या भएको छ होला । आफ्नो वाईफाईको स्पीड कसरी बढाउने भनेर केही उपायहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
वाईफाईको फर्मवेयरलाई अपडेट गर्ने
सबैभन्दा सानो समस्या भनेको राउटरको सफ्टवेयरलाई अपडेट नगरेकाले यस्तो भएको हुन सक्छ । राउटर कम्पनीहरुले पनि फोन कम्पनी जस्तै सफ्टवेयर अपडेट गर्न पर्छ ।कहिले काँही राउटर कम्पनीले आफ्नो सुरक्षाको लागी नयाँ फर्मवेयर वा ब्याट्री परिवर्तन गरेको पनि हुन सक्छ । नयाँ राउटरहरुमा सफ्टवयेर सेटिङबाट नै अपडेट गर्न मिल्छ । तर पुरानो राउटर भएमा पहिले अपडेटलाई म्यानुअली डाउनलोड गर्ने र त्यसपछि आफैले इन्स्टल गर्नु पर्दछ ।
सही फ्रिक्वेन्सी चयन गर्ने
अहिलेको आधुनिक राउटरमा छुटाछुट्टै दुई ओटा ब्यान्ड हुने गर्दछ । पहिलो ब्याण्डले धेरै लामो दूरीलाई समेट्छ तर वाईफाईको स्पीड भने एकदमै सुस्त हुन्छ । दोस्रो ब्याण्डको प्रयोगले भने गतिशील इन्टरनेट प्राप्त हुन्छ । यदी स्ट्रिमिङ गर्नुपरेमा डिभाइसलाई राउटरको नजिकै राख्नुपर्छ ।
वाईफाई रिपीटरहरु अप्रचलित हुदै गएको छ ?
वाईफाई रिपीटरले इन्टरनेटलाई गतिशील बनाउने विश्वास राखिएको हुन्छ तर यो पुरै गलत कुरा हो । रिपीटरले राउटरको सिग्नललाई रिब्रोडकास्ट गर्ने मात्र गर्दछ । राउटरलाई बरु लामो इथरनेट केबल सँग जोडनुपर्छ र यसले स्पीड बढाउने गर्दछ । घर धेरै ठूलो वा भित्ता बाक्लो भएर पनि इन्टरनेट सुस्त हुने गर्दछ ।
धेरै अरु डिभाइसलाई वाईफाईसँग जोड्दा पनि इन्टरनेटको स्पीड कम हुँदै जान्छ । माइक्रोवेभ र पुरानो कर्डलेस फोनले पनि इन्टरनेटलाई हस्तक्षेप गर्ने गर्दछ । यो समस्यालाई हटाउन हामी वायरलेस च्यानल देखाएको च्यानलमा जानुपर्दछ ।राउटरको सेटिङ्गमा गएर हामीले आफ्नो नेटवर्कको प्रकार हेरेर च्यानल बदल्न सक्छौँ । यसको लागी पहिले हामीले वाईफाई च्यानल स्क्यानर एप प्रयोग गरेर कुन च्यानल प्रयोग गर्दा ठीक होला भन्ने कुरा जान्न सक्छौँ ।
मेस नेटवर्किङ्ग सिस्टम प्रयोग गर्ने
मेस राउटर सिस्टमको प्रयोग गरेर हामीले सबै वाईफाईको समस्यालाई हटाउन सक्छौँ । यसले नेटवर्कको ब्याण्ड बढाउनलाई मद्दत र्पुयाउँछ र कुन च्यानलले हस्तक्षेप गर्छ भन्ने कुरा थाहापाएर च्यानल परिवर्तित गरिदिन्छ ।
नेटगियर,लिन्कसीस जस्ता कम्पनीले यो सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । मेस राउटर सिस्टमले सबै नेटवर्क समस्यालाई हटाइदिन्छ ।आइसिटी समाचारबाट
आज सुन र चाँदीको मुल्य बढ्यो
आज बस्ने भनिएको ओली–प्रचण्डबीचको भेटवार्ता स्थगित
आईफोन ट्वेल्भ आज सार्वजनिक हुँदै
जीमेलको लोगो पुनः डिजाइन गरिँदै
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको अन्तिम परीक्षा अनलाइनबाटै हुने
कोरोना रोकथाम तथा न्युनीकरणका लागि रोबोट सार्वजनिक गरिने
वित्तिय क्षेत्रलाई आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्न कलेज र बैंकबिच सम्झौता
अबदेखि ब्यालेन्स थाहा पाउन ८१४४३ डायल गर्नुपर्ने
प्रहरीमा डीआईजीको दरबन्दी १९ र्पुयाउने गृहको तयारी